वयोधा अस्पतालले निरन्तर प्रसुति तथा स्त्रीरोग सेवा दिने « LiveMandu
वयोधा अस्पतालले निरन्तर प्रसुति तथा स्त्रीरोग सेवा दिने
२० जेष्ठ २०७८, बिहीबार १६:५६
कोरोना संक्रमणका कारणले गर्दा नियमित स्वास्थजाँच गर्ने बिरामीहरु लगायत समग्र मेडिकल सेवा नै प्रभावित भएको छ । यो विश्वव्यापी जनस्वास्थगत आकस्मीक अवस्था हो । यद्धपी नियमित जाँच गराउनुपर्ने, दिर्घरोगी अनि प्रसुति स्वास्थ सेवा सुविधाका बिरामीहरु अत्याधिक मर्कामा परेका छन् ।
कोरोना संक्रमण त्रास अनि अस्पतालहरुमा कोरोना संक्रमणको बढ्दो जोखिमका कारणले आकस्मीक बाहेक अन्य सबै सेवाहरु बन्द गरिएको अवस्था छ । यस अवस्थामा रुटिन चेकअपका अन्य बिरामीहरुका साथैं प्रसुतिसेवा र स्त्रीरोग सम्बन्धी उपचार पाउनुपर्ने हरुलाई ठूलो अफ्ठेरो परेको छ ।
एकपटक कोरोना संक्रमण भएकी आमाको प्रसुति सुविधामा के के ध्यान दिनुपर्छ ?
कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको अवस्थामा नै प्रसुति गराँउदा के गर्नुपर्छ ?
अनि यी सेवाहरुलाई कसरी प्रभावकारी र कम जोखिमरुपमा गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न सबैलाई लागिरहेको छ ।
काठमाण्डौ बल्खुमा रहेको वयोधा अस्पतालले कोरोना संक्रमण जोखिमलाई ब्यबस्थापन गर्दै स्त्रीरोग तथा प्रसुतिसेवा ग्राहकहरुका लागि मेटेरनीटी क्लीनीकलाई निरन्तरता दिन थालेको छ । आफ्ना विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको बिशेष निगरानीमा अब गर्भवती चेक जाँच, प्रसुति सुविधा लगायत प्रसुति र स्त्रीरोग सम्बन्धी शल्यक्रियाहरु समेत वयोधाले निरन्तरता दिने बताएको छ ।
प्रसुति सेवा आफ्नो निश्चित समयमा हुने प्राकृतिक प्रक्रिया भएको र मुख्यतया कोरोना संक्रमीत महिलाहरुको हकमा प्रसुति प्रक्रियामा लिइनुपर्ने विशिष्ट ख्याल र सुरक्षालाई वयोधा विशिष्ट तालिमप्राप्त जनशक्तिहरुले हेर्ने बताइएको छ । कोरोना संक्रमण जोखिम, कोरोना संक्रमीत आमाको प्रसुति लगायत अन्य थुप्रै चुनौतिहरु थपिएको अवस्थामा वयोधाको विशिष्ट चिकित्सक र स्वास्थकर्मीहरुको समुहले सेवा प्रदान गर्ने बताइएको छ ।
स्त्तीरोग तथा प्रसुति विषयमा कुनै परामर्श, चिकित्सकको समय या अन्य कुनै सुविधा चाहिएमा वयोधा अस्पतालमा सोझै सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।